Vao tsy ela akory izay, ny jiro hazo Fujian Linsen, atsinanana mankany Hongye, Morgan Electronics, Hai Le Electronics ary orinasa maro hafa PCB dia namoaka ny vidin'ny birao PCB, saika nitombo 10% avokoa.
Tamin'ny fiandohan'ny volana jolay, Shandong Jinbao, Kingboard, Mingkang, fanjakana Weili, Jin Anguo ary orinasa maro hafa dia namoaka varahina, CCL ary fampandrenesana fiakarana vidiny hafa, ny fiakaran'ny vidin'ny foil varahina isaky ny taonina 1000-2000 RMB, ny birao nilahatra nampitombo ny 10RMB / pcs, fitaratra insclika ccl nampiakatra 5RMB / pcs, ravina metaly nanangana 5RMB / pcs.
Ao amin'ny fanamarihana ny vidiny, ny takelaka, ny asa, ny simika ary ny vidiny hafa dia nanjary anton-javatra telo tamin'io fiakaran'ny vidiny io. Raha ny marina, ny fiakaran'ny vidiny dia singa iray lehibe amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny fanovana sy ny tinady. Ny lazan'ny vokatra elektronika sy ny fanavaozana ny tinady tsena terminal dia nitombo, ny firongatry ny tsena LED ambany ambany dia nitohy miakatra, entin'ny fangatahan'ny birao PCB marobe.
Ny kojakoja sasany an'ny fampisehoana LED, toy ny tabilao PCB, lalimoara sns., Ny fizotry ny famokarana dia miteraka fandotoana be dia be, tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny tontolo iainana nasionaly, voatery nanitsy sy nanatsara ny indostria, izay manatsara ny vidin'ny accessories ireo.
Ny vidin'ny akora dia ny rivotra ka hatramin'ny alina, nanomboka tamin'ny taon-dasa dia nanomboka nampiakatra ny vidiny ny kojakoja sasany. Raha teo am-pitondrana ny fanavaozana ny fanjakana, dia manolo-tena amin'ny fanatsarana ny haavon'ny tombom-barotra amin'ireo orinasa indostrialy. Midika izany fa hitohy ny vidiny. Ho an'ny terminal, vaovao ratsy ity.
Mety misy IC mpamily ihany koa ny vidiny. Araka ny loharanom-baovao indostrialy, ny Epistar ankehitriny amin'ny famatsiana fihenjanana. Miroborobo ny pitch kely, ny fangatahana tsena matanjaka dia tsy vitan'ny hoe mitondra baiko sy tombom-barotra fotsiny, misy ny tsindry pression ny akora mahazatra.
Ny Insiders dia maminavina fa ny satan'ny famelana sy ny fangatahana dia hitohy hatramin'ny taona manaraka, izay midika fa misy fotoana fohy amin'ny vidiny na hitohy.